Igwe Ọdụdọ Magnetic Holding Manufacturers & Suppliers - China neticlọ Ọrụ Na-ejide Magnetik
Ọ dị mfe na-edebe ma weghachite magnetik lifter si ferrous umi na ON / Gbanyụọ pushing ahụ. Enweghị ọkụ eletrik ma ọ bụ ike ọzọ dị mkpa iji jiri ihe ndọta a rụọ ọrụ.
Portable Permanent Magnetik Hand Lifter maka Transshipping Metal efere
Onye na-adịgide adịgide Magnetic Handlifter ejirila naanị ihe eji eme ihe eji eme ihe na ogbako, ọkachasị mpempe akwụkwọ yana akụkụ dị nkọ ma ọ bụ akụkụ mmanụ. Igwe na-arụ ọrụ magnetik na-adịgide adịgide nwere ike inye ikike 50KG gosipụtara na-ebuli ike na 300KG Max na-adọpụ ike.
A na-emepe Igwe Ọdụdọ Yellow Pilot na-eme ka ndụ dị nchebe maka ndị na-anya ụgbọ mmiri site na ịnye isi ihe arịlịka na-ewepu maka ubube dị n'akụkụ ụgbọ mmiri ahụ.
Onye na-adọta ihe magnetik nwere ike ijide ígwè / nchara iberibe ma ọ bụ ihe igwe na mmiri, na ntụ ma ọ bụ n'etiti ọka na / ma ọ bụ granulu, dị ka ịdọta ihe igwe site na electroplating bath, kewapụ ájá ígwè, mpempe ígwè na ntinye akwụkwọ site na lathes.
Ezubere ihe nkedo magnetik maka maka ịdọta akụkụ ígwè site na ihe ndị ọzọ. Ọ dị mfe ime ka ala kpọtụrụ akụkụ igwe ndị nwere ume, wee dọpụta aka ahụ iji weta akụkụ igwe ahụ.
Igwe ihe magnetik a na-ewepụta nwere ike ịdọta iberibe ígwè na nke ígwè dị ka kposara, screwdrivers, mbọ, na ihichapu ma ọ bụ ígwè dị iche na ihe nchara site na ihe ndị ọzọ.
Igwe egbe magnet a siri ike kwesịrị ekwesị maka egbe egbe, egbe egbe, egbe, egbe, egbe egbe na egbe nke ụdị niile iji zoo n'ụlọ ma ọ bụ nchekwa ụgbọ ala, ma ọ bụ ngosipụta. Ọ dị mfe ịwụnye ka ị nwee ike ịtọ ya n'ebe ọ bụla na-enweghị nsogbu!
Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe na mkpuchi Rubber
Igwe egbe magnet a siri ike kwesịrị ekwesị maka egbe egbe, egbe egbe, egbe, egbe, egbe egbe na egbe nke ụdị niile iji zoo n'ụlọ ma ọ bụ nchekwa ụgbọ ala, ma ọ bụ ngosipụta. Gị elu logo ebi akwụkwọ dị ebe a.
Rubber Ekpuchi Magnetik Base Mount Mgbodo maka Car Ikanam n'ọnọdu
Ezubere ihe mkpuchi magnetik a maka oghere ụgbọ ala ọkụ na-ejide ma na-etinye ya. Ihe nkpuchi plasta a bụ echiche maka ichebe eserese ụgbọ ala site na mmebi.
Igwe Igwe Igwe Igwe Na-ejikwa Aka
A na-etinye magnet siri ike magnet na akwa mkpuchi roba dị elu, nke na-eme ka ihu ala kọntaktị dị mma mgbe ị na-etinye ihe mgbaàmà magnet na ụgbọala ndị ọzọ. mgbasa ozi.
Rektangluar Rubber Dabere Ijide Igwe Ọdụdọ
Ngwongwo ndị a na-ekpuchi roba nke nwere akụkụ anọ bụ ihe ndọta siri ike nke ejiri otu ma ọ bụ abụọ n'ime eriri. A na-emepụta magnet na roba nke ọma site na ihe ndị dị elu ma si otú a na-achọpụta ngwaahịa siri ike ma na-adịgide adịgide. A na-emepụta magnet roba nwere eri abụọ nke ọkwa N48 maka ike ọzọ
Igwe Igwe Igwe Igwe na Mpụga Mpụga
Igwe ihe mkpuchi roba a dabara adaba maka ihe magnetik na-edozi ihe site na eriri dị ka ngosipụta mgbasa ozi ma ọ bụ ihe nchekwa nchekwa n'elu ụlọ. Mbadamba dị n’elu nwere ike ichebe ihe ndọta site na mmebi na nchara na-apụta.